Virginia Kuchengeta Vagina Kusimbisa Gel 100 - VirginiaCare
Our Vaginal Inosimbisa Gel haisi gel yakajairika, kana chigadzirwa chemakemikari. Yedu gel ine 100% yezvisikwa zvigadzirwa uye yakagadzirwa pasi pekutungamira kweGynecologists uye Dermatologists. Vaginal Tightening Gel inobatsira kunyorovesa, kusimbisa uye kumutsiridza mukadzi. Kwete chete iyo inosimbisa yako yemadzimai madziro, asi zvakare inodzosera kusimba.
Zvakanakira Revitalize 100 ™:
Firm yekupinda pasikarudzi uye inoshandiswa seyakagadzika nekuti yakachengeteka kushandisa nemakondomu, yakanakira mushure mekubata mukadzi kusangana nekutsi kwemukadzi.
Nechishandiso chimwe chete chezuva nezuva, unogona kucherechedza chakakomba mhedzisiro mukati memasvondo 1-2.
Inodzivirira Vagina yakaoma
Zvemukati: 60 ml
MDD: Gel mushure mekuvhura gumi nemaviri mwedzi
WesternUnion kana MoneyGram kana ikatsigirwa munyika yako!
Mari pane Dhirivhari (COD): Inowanikwa muIndia nePakistan chete. Dzimwe nyika dzese ndapota musasarudze iyi nzira yekubhadhara pakubuda!
Ichi chigadzirwa chakagadzirwawo nezvinotevera Active Chinhu:
Hamamelis inopenga. Iyo inodzora kuzvimba matishu uye inogadzirisa kunhuwa uye kutsamwa. Iyo ine akawanda matangi echisikigo ayo anogona kudzikira akatsva, kuzvimba matishu, uye kusimbisa iyo pores. Hamamelis zvakare ine gallic acid, iyo ine antiviral uye anti-fungal zvivakwa.
Ichi ndicho chinonyanya kuzivikanwa uye chinonyanya kuzivikanwa cheayo anti-kupisa, anti-fungal, uye antibacterial zvivakwa kuchengetedza hutano hwakanaka mukati memukadzi. Inokurudzirawo kumutsiridzwa kwemasero, nei ichiwanikwa mune zvigadzirwa zvakawanda zvekunaka. Vaginal cell regeneration inobatsira kumutsidzira uye kudzorera hutano hutano.
Chamomilla Recutita ruva rinotora
Maruva akaomeswa e chamomile ane akawanda terpenoids uye flavonoids ayo anobatsira kune avo ekurapa maficha. Iyo ine zvinyararire inodzikamisa uye inotsigira zvivakwa uye ndeye yakasikwa inowedzeredzwa sosi Izvo zvinobatsira kuwedzera iyo yekudzikisira uye yekunyorovera mafomura.
Allantoin inowanikwa mune zvigadzirwa zve botanical zve comfrey chirimwa. Inobatsira kumutsiridza madziro emadzimai nekutenda kune ayo anobatsira mhedzisiro. Inowedzera kutsetseka kweganda uye kuwanda kwemasero kunokurudzira kupora kwemaronda uye ine chinozorodza, chinozorodza, uye chinodzivirira ganda.
Peppermint inoonekwa seinopenga, inorwisa mabhakitiriya, emetic, uye inosimudzira. Misoro peppermint zvinowedzera zvinoshandiswa kugadzirisa kuruma uye kubvisa kutsamwa uye kuzvimba. Yayo antiseptic, antibacterial, anti-fungal uye antimicrobial zvivakwa zvinodzivirira hutachiona hweCandida fungal. Marwadzo anorwadza uye kusvotwa kunokonzerwa nenguva kunogona kudzikiswa nekuda kwerubatsiro rwavo. Peppermint inoshanda sekuzorora kwemhasuru uye nekudaro inoderedza marwadzo echirwere. Mvura-yakasanganiswa peppermint mafuta inogona kushandiswa sechidziviriro kubvisa matambudziko eganda senge rashes uye ganda rakaoma. Zvirwere, kuchenesa, kukwirisa, uye hutachiona hutachiona zvese zvakarapwa nepepermermint uye zvinobatsira kuchengetedza hutano hwemukadzi.